कोरोना बीमाका कारण टाट पल्टिदै बीमा कम्पनीहरु « Janata Samachar
काठमाडौं । व्यापारी जस्ता बनेका बीमा कम्पनीहरुले महामारीका बेला राम्रै नाफा असुल्ने गरी करिब १ अर्बको बीमा गराएका थिए । दुनियाँको कुनै देशमा नभएको कोरोना बीमा गर्दै हिडेका बीमा कम्पनीले यो बीमाबापत राम्रै नाफा हुने अपेक्षा गरेका थिए । नेपालमा खासै संक्रमण नफैलिने र भुक्तानी दाबी पनि खासै नपर्ने उनीहरुको आकल थियो । तर, त्यसबीपरित नेपालमा कोरोना यसरी फैलियो की बीमा कम्पनीहरु भागाभाग गर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । र, करिब उनीहरु टाट पल्टिने अवस्था आएको छ । इन्सुरेन्स वापत करिब १ अर्ब उठाएका बीमा कम्पनीहरुमा २ अर्ब ५४ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको माग दाबी परेको छ । भुक्तानी दाबी गर्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।
जस्तो, २ करोड रुपैयाँको इन्सुरेन्स गराएको एउटा कम्पनीमा १३ करोडसम्मको भुक्तानी दाबी परेको छ । इन्सुरेन्स वापत ६ करोड उठाएको एउटा बीमा कम्पनीले २० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी बीमा कम्पनीले तिर्नु पर्ने रकम उठाएको रकम भन्दा ३ गुणा बढीसम्म छ। र, यो रकम सबै उनीहरुले बेहोर्नु नपरे पनि घाटा भने सहनु पर्ने देखिएको छ ।
कुन बीमा कम्पनीले कति उठाए ? कति तिर्नुपर्ने भयो ?
उठाएको रकम– ४ करोड ८७ लाख १६ हजार १ सय
दाबी रकम– ४ करोड ८२ लाख ५० हजार
उठाएको रकम– २ करोड ४३ लाख २२ हजार १ सय ८०
दाबी रकम– १३ करोड ६२ लाख २५ हजार
उठाएको रकम– २ करोड ४५ लाख ५७ हजार २ सय
दाबी रकम– एक करोड ८१ लाख २५ हजार
उठाएको रकम– ३ करोड ९३ लाख ५६ हजार ४ सय ९
दाबी रकम– ११ करोड १६ लाख
उठाएको रकम– ३ करोड ६८ लाख ८ सय ४०
दाबी रकम– १७ करोड ६६ लाख ५० हजार
उठाएको रकम– २ करोड ६५ लाख ६ हजार ८ सय
दाबी रकम– १७ करोड १३ लाख
उठाएको रकम– ९४ लाख १ हजार २ सय
दाबी रकम– २ करो ९३ लख ५० हजार
उठाएको रकम– ४ करोड २४ लाख ९० हजार ४ सय ३८
दाबी रकम– ९ करोड ६९ लाख ५० हजार
उठाएको रकम– १ करोड ९९ लाख ४२ हजार २०
दाबी रकम– ८ करोड २१ लाख ५० हजार
उठाएको रकम– २ करोड ९५ लाख ५८ हजार
दाबी रकम– ६ करोड ६० लाख ५० हजार
उठाएको रकम– १ करोड ९ लाख १७ हजार १०
दाबी रकम– एक करोड ६७ लाख ५० हजार
उठाएको रकम– १ करोड ९१ लाख १५ हजार ८ सय
दाबी रकम– ४ करोड ५७ लाख
उठाएको रकम– ३ करोड ३३ लाख १० हजार ५ सय
दाबी रकम– १४ करोड ९६ लाख २५ हजार
उठाएको रकम– १ करोड ९ लाख ७१ हजार ४०
दाबी रकम– ४ करोड ३८ लाख ५० हजार
उठाएको रकम– ३२ करोड ४७ लाख ९६ हजार ९ सय ९६
दाबी रकम– १९ करोड २३ लाख
उठाएको रकम– ७ करोड ८२ लाख ९७ हजार २ सय ३५
दाबी रकम– २० करोड ९८ लाख २५ हजार
सानिमा जनरल इन्सुरेन्स
उठाएको रकम– १ करोड १ लाख ३२ हजार ४ सय
दाबी रकम– ६ करोड २८ लाख ७५ हजार
उठाएको रकम– ११ करोड ५४ लाख ७२ हजार ६ सय
दाबी रकम– ३३ करोड ७३ लाख
उठाएको रकम– ६ करोड ३ लाख ६२ हजार
दाबी रकम– १२ करोड २८ लाख ५० हजार
उठाएको रकम– १ करोड ८४ लाख ५३ हजार १ सय
दाबी रकम– ५ करोड ७ लाख ५० हजार
यसरी, हरेक बीमा कम्पनीले जति रकम नागरिकसँग कोरोना बीमावापत उठाएका छन् त्यो भन्दा २ देखि ३ गुणा बढी रकम तिर्नु पर्ने भएको छ । यो दायित्व अझै बढ्ने निश्चित छ । जसले गर्दा नाफा खान कोरोना बीमा गराउँदै हिँडेका बीमा कम्पनीहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यद्यपी सबै घाटा बीमा कम्पनीले मात्रै भने बेहोर्नु पर्ने छैन । जस्तो, १ अर्ब भन्दा बढी तिर्नु पर्ने भए थप १ अर्ब पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्ने छ । २ अर्बमाथिको दायित्व आए महाबिपत्ति कोषले ५० करोड दिनेछ । २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी तिर्नु भए बीमा समितिले १ अर्ब बेहोर्ने व्यवस्था छ । र ३ करोड ५० लाख भन्दा बढीको दाहित्व बहन गर्नुपर्ने भए सरकारले दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि बीमा कम्पनीहरु ३ कारणले घाटामा जाने छन् । पहिलो कारण उनीहरुले उठाएको २० प्रतिशत रकम अर्थात करिब २० करोड रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीमा गएको छ । दोस्रो कारण महाबिपत्ति कोष भने पनि त्यहाको ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरु कै हो । तेस्रो बीमितलाई रकम दिलाउन जनशक्ति र समय उनीहरुले लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यी तीन कारणले बीमा कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।